၂၉ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ
(မလေး: Sukan Asia Tenggara ke-29)
၁၉ ရက် ဩဂုတ်လ ၂၀၁၇ ခုနှစ်
၃၀ ရက် ဩဂုတ်လ ၂၀၁၇ ခုနှစ်
ဘူကစ်ဂျာလီ အမျိုးသား အားကစားကွင်း
၂၀၁၇ ခုနှစ် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ(မလေး: Sukan Asia Tenggara 2017)ကို တရားဝင်အမည်အားဖြင့် ၂၉ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ(မလေး: Sukan Asia Tenggara ke-29)ဟုခေါ်ဆိုသည်။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သော အားကစားပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့၌ ကျင်းပသောကြောင့် ကွာလာလမ်ပူ ၂၀၁၇ ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။ ၂၉ ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းကို ဩဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့မှ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြီး အားကစားအမျိုးပေါင်း ၃၈ မျိုးတွင် ပြိုင်ပွဲပေါင်း ၄၀၄ ပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ဤအကြိမ်နှင့်ဆိုလျှင် မလေးရှားနိုင်ငံ၌ ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့သည်မှာ ခြောက်ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီး ယခင်အကြိမ်များမှာ ၁၉၆၅၊ ၁၉၇၁၊ ၁၉၇၇၊ ၁၉၈၉ နှင့် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တို့တွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အားကစားပြိုင်ပွဲကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့မှ ၃၀ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ပေမယ့် အားကစားပြိုင်ပွဲများစွာကို ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့မှစတင်၍ ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၁ နိုင်ငံမှ အားကစားသမား ၄၆၄၆ ဦးသည် အားကစား ၃၈ မျိုးမှ ပြိုင်ပွဲ ၄၀၄ ပွဲကို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အားကစားပြိုင်ပွဲကို မလေးရှားဘုရင် ပဉ္စမမြောက် မူဟာမတ်(Muhammad V)မှ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် နာဂျစ်ရာဇက်(Najib Razak)မှ ဘူဂစ်ဂျာလီအားကစားကွင်းတွင် အားကစားပြိုင်ပွဲ ပိတ်သိမ်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။
အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ဆုတံဆိပ်အများဆုံးကို အိမ်ရှင်ဖြစ်သော မလေးရှားနိုင်ငံမှ ရရှိခဲ့ပြီး ၎င်းနောက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ အသီးသီး ရရှိခဲ့သည်။ အားကစားပြိုင်ပွဲများစွာနှင့် စံချိန်များကို ယခုအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့ပေမယ် ပြိုင်ပွဲတွင် များစွာသော အငြင်းပွားမှုများနှင့် နည်းပညာမှားယွင်းမှုများ ရှိခဲ့ပြီး အားကစားပြိုင်ပွဲသည် အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပရန် ကုန်ကျမှုများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအကြားတွင် အားကစားပြိုင်ပွဲများအား ပြိုင်ပွဲစံနှုန်းများမြှင့်တက်လာမှုနှင့်အတူ ယေဘုယျအားဖြင့် အားကစားပြိုင်ပွဲသည် အောင်မြင်သည်ဟု ဆိုရပေမည်။
၁.၂ တည်ဆောက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း
၃.၂ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သော နိုင်ငံများ
၅ စိုးရိမ်ပူပန်ဖွယ်ရာများနှင့် အငြင်းပွားဖွယ်ရာများ
ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲထုံးတမ်းအရ ပြိုင်ပွဲလက်ခံကျင်းပခြင်း ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ ဖက်ဒရေးရှင်း (SEA Games Federation (SEAGF))တွင်ပါဝင်သော နိုင်ငံများမှ အလှည့်ကျ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတိုင်းမှ ပြိုင်ပွဲအား တစ်နှစ်စီ တာဝန်ယူကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး ကျင်းပလက်ခံကျင်းပမည် (သို့မဟုတ်) မကျင်းပါနိုင်ခြင်းကို ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။
၂၀၁၂ ဇူလိုင်လတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသော SEAGF အစည်းအဝေး၌ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် နှစ်နှစ်တစ်ခါကျင်းပသော ဒေသတွင်းအားကစားပြိုင်ပွဲကို အခြားသောနိုင်ငံများမှာ လက်ခံကျင်းပနိုင်သည့် အဆိုမရှိသောကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ခဲ့သော မလေးရှားနိုင်ငံ အိုလံပစ်ကောင်စီ(Olympic Council of Malaysia) အတွင်းရေးမှူးချုပ် Sieh Kok Chi သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ထို့နောက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အိမ်ရှင်အဖြစ် တာဝန်ယူရမည်မှာ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ဖြစ်သင့်သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် ဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အစား ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပရန် ဆန္ဒရှိခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံသည် ၂၀၁၇ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲအား အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့ရသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ ဆီးဂိမ်းကျင်းပရေးကော်မတီကို ပြိုင်ပွဲများအတွက် ပြင်ဆင်မှု ကြီးကြပ်ကွဲကဲရန် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲအတွက် အဓိကအားကစားကွင်းဖြစ်သော ဘူကစ်ဂျာလီ အမျိုးသား အားကစားကွင်း
၂၀၁၇ ခုနှစ် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲကို မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်များစွာတွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘူကစ်ဂျာလီ အားကစားကွင်းပလပ်အတွင်းရှိ ရှိနှင့်ပြီးသော အားကစားကွင်းများကို အဆင့်မြင့်တင်ခဲ့ပြီး Nilaiမြို့ Negeri Sembilanပြည်နယ်တွင် စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲများအတွက် velodrome ပုံစံ အားကစားကွင်းသစ်ကို မလေးရှားရင်းဂစ် ၈၀ မီလီယံ အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လနှောင်းပိုင်းတွင် ပြီးစီးခဲ့ပြီး ၂၆ မေလ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်းတွင် ဆာဘတ်ချ်ပြည်နယ်နှင့် ဆာရာဝပ်ပြည်နယ်တို့တွင် ပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်တချို့ကို ကျင်းပရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ သို့ပေမယ် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ၏ Chief Executive Officer ဖြစ်သူ Zolkples Embong သည် အရှေ့မလေးရှားပြည်နယ်များအား "ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်း"ကို အဓိကအကြောင်းပြချက်အဖြစ် ရည်ညွှန်း၍ မပါဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
National Aquatic Centre Aquatics (Swimming, Diving, Synchronised Swimming, Water polo)
Sintetic Turf Field လေးပစ်
Putra Indoor Stadium ကြက်တောင်ရိုက်
MABA Stadium ဘတ်စကတ်ဘော
Kuala Lumpur Convention Centre ဘီလီယက်နှင့် စနူကာ၊ ဂျူဒို၊ ကရာတေး၊ တိုက်ကွမ်ဒို၊ ဝူရှူး၊ Pencak silat
Malaysian International Trade & Exhibition Centre Boxing, Fencing, Gymnastics, Indoor Hockey, Muay, Weightlifting, Table Tennis
Kuala Lumpur Football Stadium ဘောလုံး
University of Malaya ဘောလုံး
Pudu Ulu Recreational Park, Kuala Lumpur Petanque
3Q Equestrian Park Rawang Equestrian (Dressage, Show Jumping)
MBPJ Stadium Rugby 7s
National Shooting Range သေနက်ပစ်
ပူတရာဂျာယပြည်နယ် Putrajaya Lake Triathlon, Water Skiing, Aquatics (Open water swimming)
Putrajaya Cycling Road, Athletics (Marathon)
Putrajaya Equestrian Park Equestrian (Polo)
နဲဂဲရီ ဆမ်ဘီလန်ပြည်နယ် Nilai Velodrome and BMX Circuit Cycling Track, BMX
Nilai Square Cycling Road
တီရန်ဂါနူပြည်နယ် Terengganu International Equestrian Park Equestrian (Endurance)
ကီဒါ့ချ်ပြည်နယ် National Sailing Centre, Langkawi Sailing
ပြိုင်ပွဲကျင်းပသူများသည် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲနှင့် အာဆီယံမသန်စွမ်းအားကစားပွဲတော် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ခန့်မှန်း ၂၀,၀၀၀ ခန့်လိုမည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ ထိုစေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် အမှတ်ရေတွက်ခြင်း၊ ပွဲကြည့်ပရိသတ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လတ်မှတ်ရောင်းချခြင်းနှင့် ပရိုမိုးရှင်းများပြုလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော မတူညီကွဲပြားသော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအား လေ့ကျင့်ပေးခြင်းကို ပြိုင်ပွဲလိုဂို၊ သီချင်းနှင့် လာဘ်ကောင်အရုပ်များအား မိတ်ဆက်ပြသခဲ့သော ၂၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအထိဖြစ်သည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် လူ ၅၀,၀၀၀ မျှ စာရင်းသွင်းခဲ့ကြသည်။ အာကစားပြိုင်ပွဲစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအစီအစဉ်ကို ဘန်ဂီရှိ မလေရှားအမျိုးသားတက္ကသိုလ်တွင် ရှင်းလင်းခဲ့ပြီး အဆင့်လေးဆင့်ပါဝင်ကာ ဖေဖော်ဝါရီလမှ ဇွန်လအထိဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းမှ လျှောက်ထားသူ ၅၀,၀၀၀ အနက်မှ ၁၉,၀၀၀ ကို ပြိုင်ပွဲအတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ၉,၀၀၀ မှာ ဆီးဂီမ်းပြိုင်ပွဲအတွက် ဖြစ်ပြီး ကျန် ၄,၀၀၀ မှာ မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ၏ တရားဝင်လိုဂိုမှာ ဝါအူ ဘူလန်(Wau Bulan)လိုခေါ်သော မလေးရှားကျွန်းဆွယ်၏ အရှေ့ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်တွင် လူသိများသော လခြမ်းပုံသဏ္ဌာန် စွန်ပုံဖြစ်သည်။ လိုဂို၏ အရောင်များနှင့် အစင်းများသည် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ ၁၁ နိုင်ငံ၏ အလံများ၏ အရောင်များကို ယူ၍ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံလုံးအနှံတွင် အားကစားပြိုင်ပွဲ၏ လိုဂို ရွေးချယ်ရန် ကျင်းပခဲ့ပြီး လိုဂိုဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲတွင် ၁၇၄ ခု ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကွာလာလမ်ပူ ၂၀၁၇ လိုဂိုသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပါရာဆီးဂိမ်းအတွက်လည်း အတူတူပင် အသုံးပြုခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ၏ လာဘ်ကောင်ရုပ်မှာ မလေးရှားကျားပုံဖြစ်ပြီး Rimau ဟု အမည်ရသည်။ ထိုလာဘ်ကောင်ရုပ်ကို လိုဂို၊ ပြိုင်ပွဲသီချင်းနှင့်အတူ ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ပွဲထုတ်ပြသခဲ့သည်။ လာဘ်ကောင်ရုပ်၏အမည်မှာ မလေးရှားဘာသာဖြင့် ကျားဟု အဓိပ္ပါယ်ရရုံသာမက သူ၏ စကားလုံးတစ်လုံးသည်လည်း အဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုးစီရရှိပြီး Respect(အပြန်အလှန်လေးစားမှု)၊ Integrity(တည်ကြည်မှု)၊ Move(လှုပ်ရှားမှု)၊ Attitude(စိတ်ထား)၊ Unity(ညီညွတ်မှု) ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ သူသည် ယဉ်ကျေးပျူငှာခြင်း၊ ဖော်ရွေရင်းနှီးခြင်း၊ ယှဉ်ပြိုင်လိုစိတ်နှင့် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သော အားကစားသမားများအဖြစ် ဖော်ဆောင်သည်။
အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဘူကစ်ဂျာလီ အမျိုးသား အားကစားကွင်းတွင် ၁၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၇ ခုနှစ် MST (UTC+8) ၂၀:၁၇ တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး မလေးရှားယဉ်ကျေးမှုနှင့် သမိုင်းကြောင်းကို အဓိကထား ပြသခဲ့သည်။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပမှု ဦးစီးခြင်းကို မလေးရှားရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Saw Teong Hin မှ မလေးရှားတပ်မတော်နှင့် ပူးပေါင်း၍ Memories Entertainment creative team မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖွင့်ပွဲကျင်းပချိန်ကို မလေးရှားနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပသော ၂၉ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲကို အမှတ်ရစေရန် ရည်ရွယ်၍ ၂၀:၁၇ တွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ ဖက်ဒရေးရှင်းတွင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော နိုင်ငံ ၁၁ အားလုံးပါဝင်ကြသည်။ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော စာရင်းမှာ ပါဝင်သော သက်ဆိုင်ရာ အိုလံပစ်ကောင်စီများ(NOC) ဖြစ်သည်။
↑ "2017 Kuala Lumpur SEA Games: New dates announced"၊ 14 November 2015။ 14 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ PM Najib declares SEA Games 2016 closed။ Bernama။ New Straits Times (30 August 2017)။2September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Malaysia wins 145 golds to become SEA Games champions။ Associated Press။ Sun.Star (30 August 2017)။4September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
• Govt to pay B124m to SEA Games medal winners။ Bangkok Post (1 September 2017)။4September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
• Kuala Lumpur 2017: A successful SEA Games for Vietnam။ Nhân Dân။ Voice of Vietnam (4 September 2017)။4September 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Five on Friday:5memorable SEA Games moments။ Channel NewsAsia (1 September 2017)။2September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Michael Angelo S. Murillo (25 September 2015)။ Ready for SEA Games 2019။ BusinessWorld Online (Weekender)။ 25 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Harap kos tidak cecah RM80 juta (in Malay)။ Utusan Malaysia (13 December 2013)။ 23 February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
↑ SEA Games ran S$60.4m under budget: Grace Fu။ Channel NewsAsia (10 October 2016)။ 23 February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ </nowiki>x.php/en/news-events/93-slides1/174-baton-run-to-support-the-29th-sea-games-kuala-lumpur-2017 Baton Run to Support the 29th SEA Games, Kuala Lumpur 2017။ လာအိုအမျိုးသား အိုလံပစ်ကော်မတီ။6August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၄.၀ ၃၄.၁ Erny Suzira (2 August 2017)။ SEA Games 2017 reveals its theme song။ The Hive Asia။6August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၇.၀ ၃၇.၁ Ajinomoto Platinum Sponsor for the upcoming SEA Games။ Marketing Magazine။ Sledgehammer Communications (M) Sdn Bhd. (14 February 2017)။7August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 July 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၈.၀ ၃၈.၁ ၃၈.၂ ၃၈.၃ ၃၈.၄ ၃၈.၅ ၃၈.၆ Masoc close to achieving RM80mil Games sponsorship။ The Star (21 March 2017)။ 13 July 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄၂.၀ ၄၂.၁ ၄၂.၂ ၄၂.၃ Day 30 Kuala Lumpur 2017 Countdown: Teh Tarik Relay!။
↑ ၄၆.၀ ၄၆.၁ Grab remains as the sponsor for SEA Games – KJ။ Malaysia Gazette (30 May 2017)။5August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 July 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅၄.၀ ၅၄.၁ Satu Lagi Televisi yang Siarkan SEA Games 2017, Siapakah Itu? (in Indonesian)။ BolaSport.com (1 August 2017)။ 17 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅၅.၀ ၅၅.၁ ၅၅.၂ ၅၅.၃ Wan Syamsul Amly (10 August 2017)။ Sebanyak 2,933 warga media bertugas pada KL2017 - KJ (in Malay)။ Astro Awani။ 17 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ SEA Games: RTM apologises for flag mistakes in medal tally broadcast။ Channel NewsAsia (26 August 2017)။ 27 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၂၀၁၇_အရှေ့တောင်အာရှ_အားကစားပြိုင်ပွဲ&oldid=652679" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ ဧပြီ ၂၀၂၁၊ ၀၉:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။